Shiinaha Gelatin Sheet warshad budada ah iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Ka guurista xaashi gelatin ah ilaa budo waa qaab kale oo loo isticmaalo.
Dadka jecel inay macmacaan ma dareemayaan inayna aqoon u lahayn, waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah soo saarista macmacaanka. Shaqadu waa inay ka dhigto maaddooyinka xinjirowga, jelly-ka aasaasiga ahi waa inuu u isticmaalo sida alaabta ceeriin ah, waxaa jira budo iyo isbaarooyin suuqa yaala xilligan, haddii gurigaaga, la soo jeediyay in la isticmaalo budada ayaa noqon doonta mid aad u habboon. Guud ahaan lagu daro budada gelatin ee macmacaanka, macmacaanku wuxuu noqon doonaa Q badan oo laastik ah, jilicsan, oo calaliya.
Waxaa laga sameeyaa kolajka xayawaanka ee loo yaqaan 'hydrolysis'. Waa gelatin laga soo saaray lafaha xoolaha (inta badan lafaha lo'da). Qaybta ugu weyn waa borotiinka. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo noocyo kaladuwan oo la buuxiyo, keega mousse, pudding, jalaatada iyo cunnooyinka kale, adkeynta, laastikada.Waxay ka kooban tahay 18 amino acids, oo toddobo ka mid ah ay muhiim u yihiin jirka bini'aadamka. Gelatin waa 82% protein-ku saleysan marka laga reebo in ka yar 16% biyo iyo cusbada aan dabiici ahayn. Waxaan ka hadli doonaa daqiiqad gudaheed. Waa proteogen ku habboon.
Waxay leedahay difaac kolloidol ah, waxqabadka dusha sare, nafwaayay, sameynta filimka, ka joojinta emulsion, keydinta, qoynta, xasilloonida, iyo milanka biyaha. Waxay u tahay caawiye wanaagsan keega iyo macmacaanka. Ku kala miir biyo qabow ka hor inta aan la isticmaalin. Dareeraha dhalaalay waxay leeyihiin muuqaal wanaagsan waxayna diyaar u yihiin inay milmaan oo ay isticmaalaan, sahlan oo ku habboon in la shaqeeyo.
Waa budada jel ee badanaa laga helo macmacaanada qaabka Hong Kong. Waxay u shaqeysaa sidoo kale go'yaal gelatin ah, laakiin markii la keydiyo, waxay u baahan tahay in la shaabadeeyo. Kaliya intaadan u adeegin, ku shub shan jeer biyo qabow intii aad u baahan tahay, marka waxay isu rogaysaa jelly adag. Guud ahaan, iyada iyo gelatin xaashida waxaa lagu beddeli karaa isla qaddarka marka loo eego saamiga 1: 1. Marka lagu daro baahida loo qabo in xumbo la sii wado, dhalaalida sidoo kale waxay u baahan tahay in lagu kala saaro biyo diirran oo aan ka badnayn 40 darajo Celsius, haddii kale waxay saameyn ku yeelan doontaa awoodda adkeynta.
Faa'iidooyinka badeecada: budada wanaagsan, budada lagu milmi karo, ma laha dhadhan macaan, dhadhan siman
Hore: Xaashida Gelatin
Xiga: Xaashida 'Gelat Transparency High' ee Macmacaanka
3.3g Xaashida Gelatin